My Ringtone ၏ Error နှင့် သုံးစွဲသူ၏နစ်နာမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » My Ringtone ၏ Error နှင့် သုံးစွဲသူ၏နစ်နာမှု
My Ringtone ၏ Error နှင့် သုံးစွဲသူ၏နစ်နာမှု
- Kaung Myat Thu
Posted by Kaung Myat Thu on Mar 13, 2014 in My Dear Diary, News | 10 comments
– My Ringtone ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ တစ်ဖက်ကကိုယ့်ဖုန်းကိုခေါ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ကမကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မအားသေးလို့မကိုင်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တဖက်လူစောင့်နေချိန်မှာနားဆင်နိုင်ဖို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်(၃၀၀)ကျပ်၊လစဉ်ဝန်ဆောင် ခ (၂၀၀၀)ကျပ်ပေးပြီး Message Center 1772 ကိုလှမ်းတောင်းရယူထားရတာပါ။ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်ရဲ့သီချင်းလေးနဲ့ ရယူထားတာကြာပါပြီ။ဒီလတော့အင်တာနက်သုံးရတာတစ်လ(၃၀၀၀၀)ကျပ်လောက်ကျလို့ ဒီ My Ringtone၀န်ဆောင် ခ (၂၀၀၀)ကျပ်သက်သာအောင်ဖြတ်ထားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး 1772 ကို Message ပို့ပြီးဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လ ကုန်တော့ ငွေ(၂၀၀၀)ကျပ်ကိုထပ်ဖြတ်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ပဲမှားတာလားဆိုပြီးအမှတ်တမဲ့
– ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီး ကျွန်တော့်ဖုန်းကိုခေါ်တဲ့လူတွေက ဖုန်းမကိုင်ရသေးခင် ဖုန်းချချသွားကြတာတွေ့ရတယ်။သြော် Miss Call ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ပေါ့။တစ်နေ့တော့အိမ်ကသမီးကဖေ့ဖေ့ဖုန်းခေါ်ရတာ သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါလို့ပဲပြောပြောနေလို့ဖုန်းချလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ သြော်ဒါဆိုဖေ့ဖေ့ဖုန်းက Software Application တွေများနေလို့ဖြစ်မယ် မလိုတာတွေပြန်ဖျက်ပစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မိတယ်။
– ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်တော့ ဆရာကိုကြီးမိုက်က ခင်ဗျားဖုန်းခေါ်ရတာခက်လိုက်တာဗျာတဲ့။ကျွန်တော်
– အစည်းအဝေးခန်းထဲဝင်နေလို့မကြားတာဖြစ်မယ်၊ခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဖုန်းကခေါ်မယ်ကြံလိုက် တိုင်းသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါသဖြင့်ပဲပြောနေတာတဲ့ ဟုတ်တယ်အစ်ကိုကြီးရေ ကျွန်တော့်ဖုန်း
– ကိုပြန်စစ်ကြည့်ရဦးမယ်ဆိုပြီးပြန်စစ်ကြည့်တော့ထူးခြားတဲ့အပြစ်မတွေ့ရဘူး။ ဒါနဲ့စိတ်ထဲမသင်္ကာဖြစ်ပြီး ဖုန်း Simcard ကိုဖြုတ်ပြီး တခြား Handset ထဲ ထည့်စမ်းကြည်တော့ အဲဒီလိုပဲ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပဲပြောနေတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာချက်ကနဲဆိုသလိုစဉ်းစားမိသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ 1876 ကိုဆက် 1772 162 ကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့မှ သူတို့ရဲ့စက် Error ကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါ။တစ်ရက်နှစ်ရက်နေရင်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒီနေ့အထိအဲဒီအသံကိုကြားနေရသလို သီချင်းသံမကြားရပဲ ဖုန်းခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုပေးနေတဲ့ Y Talk ရဲ့ 1772 Message My Ringtone ၀န်ဆောင်မှုပါလား။
– My Ringtone ကို စတင်မိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်–ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးခံနေရတာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲနော်–
About Kaung Myat Thu
Kaung Myat Thu has written5post in this Website..
View all posts by Kaung Myat Thu →
My ring tone ကို သူများဖုန်းတွေမှာ ကြားရတော့ သဘောကျလို့ ထည့်ဖို့လုပ်မလို့ မေးမြန်းကြည့်တာ ထည့်ထားတဲ့လူတိုင်းက ကန့်ကွက်ကြတာနဲ့ မထည့်ဖြစ်တော့တာတောင် ခပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်နေပြီ။
တစ်လ နှစ်ထောင် ဖြတ်မယ်ဆိုတာက်ု နှမြောတာနဲ့ပဲ မထည့်ုဖြစ်တာ
နဂိူကမှ တန်ဖိုးနည်း အမည်ခံ ကိုးသောင်းကျော်ပေးလို့မှ ဖုန်လေးတစ်လုံးကိုင် နိုင် တာ ရယ်
တစ်လတစ်လ ဘေလ်တွေ မနည်းကုန်နေတော့
အဲဒီ သာယာမှု ( ဒီ သတင်းအရ မသာယာမှု)တွေနောက် မလိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ
ဒီ ပိုစ့်က copy / paste ဖြစ်နေလို့ပထမစာမျက်နှာမှာမပေါ်တာပါ။
category တစ်ခုခု သင့်တော်ရာ ရွေးပြီး တင်မှ အားလုံးမြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ 
ခင်မင်လေးစားလျက်. . .
မကျေနပ်တာတွေ ရင်ဖွင့်ချင်မှ ဂဇက် ရွာသူားတွေကို သတိရတဲ့ ကောင်းမြတ်သူ။:D
ကျမတို့တော့ အဲဒီ ၂၀၀၀ နှမျောလို့ မထည့်မိတာ ကံကောင်းတာပဲ။
မဟုတ်ရပါဘူး မပဒုမ္မာရယ် ရွာထဲကိုတော့ခဏခဏလာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွက်၊ အလုပ်အတွက် လုပ်နေရတဲ့အချိန်ကများပြီး နားချိန်သိပ်မရှိတာကြောင့်ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဖြစ်ပဲလှည့်
့ပြန်ပြန်သွားနေရတာပါ။ အခုတောင်ဒီ Post ကိုတင်ဖို့ ၃ ရက် ၄ရက်လောက်အရှိန်ယူပြီးတင်လိုက်ရတာ။ သူကြီးနဲ့ရွာသားအားလုံးကိုသတိရလျက်ပါ။
အလကား ပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမှ မဟုတ်တာပဲ ….
သူများတွေ ထည့်တာ အားကျလို့ဒီက ထည့်မလို့ ကြံနေတာ….
အစကထည့်ထားသေးတယ် နောက်တော့ တလနှစ်ထောင်ဖြတ်တာမခံနိုင်တော့တာနဲ့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။
၂၀၀၀ ဆို မိနစ် (၄၀) တောင် ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီး မထည့်ဖြစ်တော့ဘူး.. ဟီး..
အံစရာပြောသလိုပဲ.. တောင်းပန်ရုံနဲ့ ကျေအေးပေးလို့မရဘူးလေ..
တစ်ခုခုတော့ action ယူပစ်ရမှာ.. သူတို့က sorry တစ်လုံးနဲ့ပြီးပေမယ့် ကိုယ်တွေက အရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်..
ဆောရီးပါ ကိုကောင်းမြတ်သူရေ…ဒီပို့စ်လေးကိုဒီနေ့မှတွေ့တယ်…ခုတလောလည်း သမီးနဲ့အတူ
ဆယ်တန်း ဖြေနေရတာမို့…နေ့တပိုင်းလောက်က နေမထိထိုင်မထိနဲ့မို့ပါ…..မပဒုမ္မာပြောသလိုမဖြစ်စေနဲ့ဗျာ..
၂၀၀၀ဆို အင်တာနက် အကြာဂျီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး သုံးလို့ရတယ်